UKUJONGWA KWAKHONA KWESHELF YAM YAMAMANGA: I-MY HERO ACADEMIA TEAM-UP MISSIONS - UMKHONO
Umthetho Obhaliweyo Ujongene Nomculo
Ishelfu yam yeManga ibonisa: IQela lam leMidlalo yamaQela amaQhawe-phezulu uMqulu 1
Kusisiqinisekiso esihle ukuba into ikhona IHero lam leMfundo kuyo ndiza kuyizama, ke molo, wamkelekile Imisebenzi yeQela-phezulu , uthotho oluncinci olujikelezayo olujolise ngakumbi, kulungile, ekusebenzisaneni. Usenokucinga ngokwakho, Bri, uthotho ngokwalo ngokubanzi lujolise ekusebenzisaneni, kodwa Imisebenzi yeQela-phezulu ikhupha lonke uluntu olutshabalalisayo luya kuqhekeka ukuba amaqhawe aphulukana nemisonto yeploti ayitshintshe kunye nabantwana abafanelekileyo abafunda i-ins kunye nokuphuma kwendlela yabo yobukrelekrele.
Isishwankathelo se IQela lam leQela leMfundo eliPhezulu Umqulu 1
Ngoku onke amandla ahlala phantsi, iKhomishini yoKhuseleko loLuntu yoLuntu ilindele ukuba kubekho ukonyuka kuhlaselo lwabenzi bobubi. Oku kukhokelele ekudalweni kwenkqubo entsha yelizwe lonke ebandakanya abafundi abangamagorha abasebenza ngoncedo. Oku kuthetha ukuba abafundi bafumana amava abawadingayo ukuze babe ngamagorha angcono KUNYE nezitalato zigcinwa zikhuselekile kwizisongelo ezinokubakho. UDeku uyacinga uwulungele lo msebenzi mtsha… ecinga ukuba angayeka ukuqhubekeka nomsebenzi awenzayo, oh, kwaye ucinga ukuba ubekwa kwiqela elilungileyo, elizolileyo, kwaye elingenabutshaba kuye—… ewe, khange ndikwazi ' Chwetheza ngobuso obuthe tye, lungiselela uxinzelelo lolutsha kwinqanaba lokufunda!
kodwa ngubani owebileyo
Khawufane ucinge ukuba u-Izuku Midoriya kunye nabanye afunda nabo baye bahamba ngemini yesikolo ngaphandle kokuphazanyiswa ngamanqanaba okugqibela abaphathi ngalo lonke ixesha elibi. Yiyo kanye le manga. Oko akutsho ukuba abayi kunyuka ngokuchasene nabenzi bobubi, kodwa izibonda aziphantse ziphakame njengoko ziqhelekile, ngakumbi ukuba ubanjiwe kwimanga.
Intetho yokwenyani: le yayiyinto ethuthuzelayo efundwayo emva, ewe, * isenzo somzimba ngokubhekisele kwi-manga arc yokugqibela *
Iqela leMishini lithuba lokuba abantwana bafunde ngokuthe ngqo kumagorha abanqwenela ukuba nawo. Kufana ne-internship arc, iqhawe elihlala linabantwana ukuqinisekisa ukuba izinto aziphumi esandleni, kwaye abantwana basebenza kunye ukusebenzisa ii-quirks zabo (kunye neengqondo zabo) ukufumana indlela yokulungisa iingxaki abadibana nazo.
Kuba oku kwenzeka kakuhle kumhlala phantsi we-All Might, ukuba ubukele i-anime kuphela kwaye uyikhetha le nto, unokumangaliswa zizinto ezimbalwa. Kwelinye, ubutshaba u-Bakugo uziva ngo-Deku buncitshiswe kakhulu kuba zimbini ngoku izimbangi ezifanelekileyo . Kuyinto ehlekisayo ngakumbi kunenzondo kuba uBakugo usengumperanian onomsindo ombi omele athethe kuzo zonke ii-cap ukuze afumane inqaku lakhe.
I-dc izihlobo ezilungileyo kakhulu ngonaphakade
I-manga ikwavumela ukuthanda abalandeli njengee-Hawks kunye neMirko zibonise, ke ukuba ufuna ngaphezulu kubo emva kofifi esilufumene kwi-anime, eli lithuba lokubabona bobabini njengamaqhawe kunye nootitshala babantwana.
Elona candelo lilungileyo kukubona ukuba ngubani odityanisiweyo kunye kunye nendlela abafumana ngayo ii-quirks zokusebenzisa kwiimeko ezithile. Kudala ndifuna ukubona iqela kunye nabalinganiswa abanee-quirks zabo ezijikeleza oko bakutyayo / abakwenzayo ngomzimba wabo, umzekelo, kwaye le manga yenza oko ngokubeka uYaoyorozu noFat Gum noTamaki. Ndikhe ndaphupha nokubona uBakugo noMirko, umfazi ovutha amalangatye njengaye, kwaye nalo manga liyakwenza oko. Kufana nokufumana ichibi elingenasiphelo lamaqela aphuphayo kunye nokusebenzisana, kuphela ngoku kuyimibhalo engcwele kuba iyenzeka kule manga. Esihogweni, andizange ndicinge ukuba ndifuna ukubona uMelissa (ovela kwimovie yokuqala IHero lam leMfundo: amaGorha amabini ) kunye noHatsume basebenza kunye ukwenza izixhobo zokuxhasa, kodwa wow, iyavakala.
Kwakhona, kukho umboniso omfutshane wabafundi abavela kwiKlasi 1-A bedityaniswa nabafundi abavela kwiKlasi 1-B, oko kuthetha ukuba ii-crossovers nezinye iiklasi (kwaye mhlawumbi nezinye izikolo) zinokwenzeka. Ndiyathemba ukuba siza kubona ukubuya kwabantwana baseShiketsu High.
Owu, kwaye kukho amabali esecaleni malunga nabazali bakaBakugo, ukuba ubunokuzibuza ukuba bazidibanisa njani.
Imisebenzi yeQela-phezulu yindlela yokusinika umxholo esingawufumaniyo kwimanga yesiqhelo ngalo mzuzu. Ndicinga ukuba kuya kuba lixesha elide ngaphambi kokuba sifumane nayiphi na loo mithambo yokufundela okanye iimviwo apho abantwana bavavanywa khona kwizakhono zabo ngootitshala babo, ke le nto ibuyisela emva kolo hlobo lwebali. La mabali mafutshane asibuyisela emva kwiintsuku apho u-Izuku wayenemincili ngokuba seU.A. kwaye sijonge phambili kuyo yonke into entsha awayezokuyifunda, owona mthombo wakhe mkhulu woxinzelelo ukusukela ekubeni uKacchan uza kundingxolisa namhlanje kwaye loo mntwana ubiwe ibhola yakhe yebhola, masincedeni siyifumane!
Ukuba uthanda izinto ezifana ne-Internship Arc (ngaphambi kokuba iStain ibonakale), uViwo lweLayisensi yeXeshana, okanye ukuqala kwe IHero yam yezifundo: Ukunyuka kwamaGorha (imuvi yesibini) apho abantwana bafumene ukunceda isiqithi sonke ngezabo, iarhente ye-lemonade stand-esque hero, uya kuba kula mabali.
Ixesha le-inbar lavi lucifer 4
Yayingeyonkqonkqoza nxamnye neestandi selemonade, btw, ndiyakuthanda ukubona abantwana beneshishini elizenzele lona.
Ungajonga Umsebenzi weQela-phezulu ngaphaya eViz namhlanje !
(Umfanekiso: Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama / SHUEISHA Inc.)
Imbali Epheleleyo Yemanyano Yasesoviet Ngamehlo Omsebenzi Othobekileyo
ubuhle kunye negqwirha lesilo
amaza angena amaza aphuma
Kevin conroy kunye nexesha daly
iintsomi zembali yetempile efihliweyo
UVanessa ovela kumdlalo we-atlanta tv
christian siriano plus iimpahla ezinkulu